Bathi akekho abangane abaningi, kanti umngane omkhulu kakhulu uhlale eyedwa futhi oyedwa. Lo muntu usezingeni elifanayo njengezingane zakini kanye nabantakwethu. Uyayazi konke ngaye futhi unayo ukuthi ungaxabana ngezidakamizwa. Khona-ke imishwana iqala: "Nguyiphi ilungelo okufanele uyenze kanjalo?" Futhi "Ubophezelekile ukwenza okunye!". Noma kunjalo, yiziphi amalungelo nemithwalo yemfanelo esinayo ngokuphathelene nabangane abangcono kakhulu?
Ngifunga ukukhuluma iqiniso, futhi iqiniso kuphela
Umngani omkhulu kunazo zonke ungcono kakhulu, ungalokothi uqambe amanga. Futhi akukhona nje ukutshela umngane ngakho konke. Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, abangane abangcono kakhulu bahlale bekhuluma iqiniso lapho bebhekene nezinyathelo nezinqumo ezingalungile. Yebo, lo umehluko phakathi komngani omkhulu nomngani. Ikakhulukazi iphathelene nokuxhumana phakathi kwabahlobo. Amantombazane ayizidalwa ezicasulayo, ngakho-ke akuwona wonke umuntu ongasho ukuthi uziphathe ngendlela ehlabayo, ukuthi le ngubo ibukeka ingathandeki futhi sekuyisikhathi sokuyisusa endlini yakho, ngoba kungavamile. Kodwa umngane omkhulu kakhulu ukhuluma ngalokhu, ngoba unelungelo. Uyakwazi kahle ukuthi amazwi akhe akwazi ukugxekwa ngempela, afanelekile ngaphambi kwakhe noma amane adlale kabi. Umngani omkhulu kakhulu lokhu akukwenziwa. Esikhundleni sokuqala ukuxolisa, uyaqhubeka egoqa umzila wakhe, ngoba uyazi ukuthi iqiniso lihlale lingcono kunokuqamba amanga. Ngokungewona owomdabu kakhulu sizama ukunciphisa lolu hlobo lwezinto, ngoba sesaba izingxabano. Kodwa umngane omkhulu kakhulu uyayibheka njengesibopho sakhe sokuvula amehlo akhe kumuntu oseduze, ngisho nalapho kwenzeka ukuthi uxabana. Okumangalisa ukuthi, ebuhlotsheni, amalungelo kanye nemithwalo yemfanelo kuhlale njalo. Sinelungelo lokukhuluma nomngani omkhulu kakhulu ngamaphutha akhe, ngoba yilokho abakuthanda ngempela futhi ngesikhathi esifanayo sinesibopho sokukhuluma leli qiniso ukuze sikwazi ukuvikela umuntu kusuka kwesinye isinqumo esingalungile noma isinqumo esingathinta impilo yakhe.
Umngani ngeke alahle, ngeke acele okuningi
Umngani omkhulu kunelungelo lokungahloniphi lutho futhi ngesikhathi esifanayo nethemba lokuqonda nokusekela. Futhi lokhu akumangazi, ngoba uma sibuza ngomuntu, siqondiswa isithakazelo esijwayelekile. Sifuna nje ukwazi ukuthi kwenzekani. Kodwa nabangane abangcono kakhulu konke kuhlukile. Yiqiniso, kunesithakazelo - lokhu kuyiqiniso, kodwa ngaphezu kwakho konke esikutholayo kumuntu, ngesimo sakhe kanye ne-takdale. Ngakho-ke, abangane abangcono kakhulu banelungelo lokukhuluma ngokuhlangenwe nakho kwabo, futhi banethemba lokuthi bazoqondwa futhi bayamukelwa yilokho abayikho. Uma befuna ukuthula, lowo muntu ngeke athole imibuzo, bese behamba nomusho wokuthi uyabuhlungu. Ngokuphambene nalokho, umngane omuhle kakhulu uzizwa umphefumulo womuntu othandekayo. Angase angazi izizathu, kodwa ukuqagela nge-intuiti ukuthi kwenzekani ngempela kulo muntu. Futhi esimweni esinjalo, umngane omkhulu kumele asekele futhi enze okusemandleni kumngani. Uma ecela ukuba ashiye futhi amshiye yedwa, akanalo ilungelo lokumsola nganoma yini noma ukubeka usizo lwakhe. Ubuhlobo beqiniso buqondana ngokungaqondakali. Ngakho-ke, umngane weqiniso uyohlale ekhumbula ukuthi esimweni esinzima kudingeka wenze ngendlela engcono ngayo kumngane, hhayi ukuthi angazibopheli. Yiqiniso, okuhlukile yizozimo lapho sibona khona ukuthi umuntu angenza okungenangqondo. Kulesi simo, umngane omkhulu kunesibopho sokukholisa, ukusiza, ukuphoqa, ukukhipha umuntu ngendlela efanele, ukuze umuntu ahlaziye ngokucophelela konke futhi aqonde ukuthi ngokuhluleka okulodwa, ukuphila ngokusobala akupheli.
Inkukhu ephuziwe kanye nengxenye ngesigamu
Umngani omkhulu kakhulu unelungelo lokucela ukwabelana nalokhu okulandelayo, futhi kufanele futhi anikeze lokhu okugcina ngokwakhe. Kule ndaba, umbuzo wamalungelo nemisebenzi ngokujwayelekile uzwakala kancane. Ngemuva kwalokho, uma ubheka ngakolunye uhlangothi, wonke umuntu unelungelo lokuphuma kulelizwe. Uma nje ubungane bangempela, umqondo wakho uba mkhulu kakhulu.Umngani omkhulu angakwazi ukuthula ngokuthula futhi angene yonke impahla yakhe emndenini wakhe, kepha uma nje esenethuba, uzogcwalisa ngokushesha konke ngenzalo. Uma abantu bengabangane isikhathi eside kakhulu kakhulu, inhloko ayifiki into engafanele ukwabelana noma ukubuza, nokuthi kungenzeka yini ukuthatha okuthile. Iqiniso liwukuthi abangane abangcono kakhulu bosuku banamalungelo kanye nemisebenzi efanayo njengamalungu omndeni owodwa. Kungaba yinto emangalisayo uma udadewethu ebuza umfowethu ukuthi kukhona okumele kuthathwe noma angayihlanganyeli nayo. Yiqiniso, uma lokhu kungumndeni ojwayelekile ohlobene nobuhlobo obuphakathi kwabantu. Kubuye kwenzeke phakathi kwabahlobo abangcono kakhulu. Babevele bajwayele ukwabelana ngakho konke baze bacabange ngalokho abanakho nokuthi banakho, bavele benze lokho okumele kube khona.
Kubalulekile ukuba umuntu othile ngesikhathi esibucayi
Umngane wangempela umuntu oyidinga ngesikhathi esinzima. Lawa magama avela ingoma yezingane empeleni eqinisile kakhulu. Incazelo yenkonzo yukuthi sinelungelo nganoma yisiphi isikhathi ukubuyela kumngane ngosizo, futhi kufanele asisindise. Ngisho noma ngabe ngehora lesithathu ekuseni, iqhwa likhahlela futhi izinga lokushisa liye lahlehla ekungeneni kwamashumi amane, umngane uzofika noma kunjalo, uma ebona ukuthi ubuhlungu kakhulu futhi bubi futhi awukwazi ukwenza ngaphandle kwakhe. Yiqiniso, kungenxa yezimo ezibucayi, hhayi mayelana ukusebenzisa umusa womuntu futhi uhlale uyidonsela kumdlalo omncane kakhulu. Kodwa uma kukhona okubi kakhulu okwenzekayo, ngaso sonke isikhathi sibhekisela ezihlotsheni zethu noma kumngane wethu omkhulu. Futhi kwenzeka ukuthi izihlobo ngeke ziphendule ngesicelo ngendlela umngane enza ngayo. Njengoba bethi, asikhethi imindeni, kodwa singakhetha abangane. Futhi uma sesimkhethile kakade, sinelungelo lokulindela ukusekelwa kwakhe konke okuvela kuye, futhi siyazi ukuthi uma eyidinga, sizoyeka yonke into futhi siyashesha ukusiza. Yebo, eqinisweni, kufanele sikwenze lokhu, kodwa empeleni, uma wazi ukuthi kukhona okubi okwenzekayo nomuntu oseduze, awucabangi ngemisebenzi, kodwa nje awukwazi ukuhlala unomumo futhi ubukele ngokuthula.
Eqinisweni, kunzima ukukhuluma ngamalungelo nezibopho zabangane, ngoba imizwa nezimo zengqondo azilula ukutshala ngendlela ethile yefomathi. Kunalokho, sivele sikhuluma ngalokho okufanele ukuziphatha komuntu uma ezibheka njengomngane omkhulu. Futhi eqinisweni, uma sihamba ukuzosiza, uma sizama ukwenza konke okuqondene nomuntu, ngisho nokuziphazamisa, lapho izithakazelo zakhe ngezikhathi ezithile ziphakeme ngaphezu kwethu, futhi ngesikhathi esifanayo asizicabangi ngisho nokuthi ngubani olungile nokuthi ngubani onecala - lobu buhlobo beqiniso enhlobo ehlanzekile , okuyinto okudingeka uyiqonde ngaphezu kwanoma yini enye.
Umona wabanye. Indlela yokuzivikela?
Ukucindezeleka kanye nomthelela walo empilweni yengqondo yomuntu
UStanislav Sadalsky wakhuluma ngesahlukaniso seVerinskaya neGrdsky
Ukwelashwa kwesibindi esingapheli ngamakhambi abantu
Amakhukhi e-Corn flour
Okuyisisekelo semfundo yezocansi zezingane
Umlingisi uSarah Michelle Gellar
Amazwi mayelana nemizwa yothando, isisa
Indlela yokuphulukisa i-sinusitis ngamakhambi abantu
I-Cancer isifo esiyifa
I-Whitney Houston noBobby Brown: inkaba yobuhle nezilo
I-Herpes: amakhambi abantu
Amathiphu amancane kwabesifazane
Le feijoa emangalisayo: zokupheka zemibukiso ewusizo kusuka e-feijoa noshukela
U-Andrei Arshavin ubhekene nomshado no-Alisa Kazmina, isithombe